CNBLUE ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yonghwa တစ်ယောက် စစ်တပ်ထဲ တိတ်တိတ်လေးဝင်သွားခဲ့
On March 7, 2018 March 7, 2018 By Naing Naing
CNBLUE ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Yonghwa က စစ်မှုထမ်းရန် ‘Kangwon-do Hwacheon-goon’ မှာတည်ရှိတဲ့ ‘Victory Division’ ဆိုပြီးနာမည်ကျော်ကြားတဲ့တပ်ခွဲမှာ လေ့ကျင့်ရေးဆင်းဖို့အတွက်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းရမယ့်နေ့မတိုင်ခင် မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ Yonghwa က သူ့ရဲ့ Twitter ကနေ “သူမနက်ဖြန် မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်သွားရတော့မှာပါ၊ ပရိသတ်ကြီးတွေအားလုံး အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာရှိကြဖို့ သူဆုတောင်းပေးပါတယ်၊ သူကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ် သူ့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ၊ အခုတော့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့အတူတင်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
여러분 저 내일 입대를 합니다. 늘 건강 챙기시고, 이루고 싶은 꿈들, 목표 모두 이루시길 응원하겠습니다. 전 잘 다녀올테니 제 걱정은 하지 마시고, 그동안 늘 행복한 일만 가득하길! 잠시만 안녕! ?? pic.twitter.com/Lf3bWVTkEE
Yonghwa ကသူစစ်မှုထမ်းရမယ့်ရက်အကြောင်း ပရိသတ်ကြီးကို အနားကပ်မှအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ Yonghwa ရဲ့ Fan တွေကတော့ သူတို့ Idol ဘယ်လောက်ပဲလျှို့ဝှက်ထားပါစေ Yonghwa သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တပ်ခွဲရှေ့မှာ လာရောက်နှုတ်ဆက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ Yonghwa ကသူ့ Fan တွေကို Special Event တွေမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြထားပေမယ့်လည်း Fan လေးတွေက အေးလွန်းလှတဲ့ ဆောင်းရာသီကိုအံတုရင်း Yonghwa ကိုလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
FNC Entertainment ကနေပြီး “Jung Yonghwa ဟာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိနေပါပြီ၊ ဒီလိုအရမ်းအေးလွန်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ Yonghwa ကိုလာရောက်အားပေးကြတဲ့ Fan တွေအားလုံးကို သူတို့ကအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နဲ့ Yonghwa တစ်ယောက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်” ဆိုပြီး CNBLUE ရဲ့ Twitter ကနေပြီး ပရိသတ်ကြီးကို တောင်းပန်ရင်း ကျေးဇူးတင်စာ ရေးသားထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Yonghwa ရဲ့ Fan တွေ သူတို့ Idol ကိုလေးစားအားပေးချက်က မျက်ရည်ကျလောက်အောင်ကိုပါပဲ…။ ☺️
Jung Yong Hwa has entered the training camp. We’re grateful for all the fans who came to support in such cold weather. Jung Yong Hwa will be back after serving the army. Thank you.
— CNBLUE (@CNBLUE_4) March 5, 2018
PREVIOUS POST Previous post: Bigbang အဖွဲ့ဝင် Daesung လည်း စစ်မှုထမ်းဖို့ရက်ကို Confirm လုပ်ခဲ့
NEXT POST Next post: တက်သစ်စ Boy Band “Why Don’t We”